Order - Word Foundation • Buugaagta, Audio, Magazine, iyo waxyaabo kale oo badan
Buugaag, Buugaag iyo Cod
Fikirka iyo Dareenka, Man iyo Naag iyo Cunug, Dimoqraadiyadda waa Is-Xukuumad iyo Masonry iyo Calaamadihiisa Waxa kale oo lagu heli karaa foomka elegtarooniga ah eeyaga Bogagga buugaagta.
Thinking and Destiny Hufan
Thinking and Destiny Buug-maqal (USB Flash Drive, qaabka MP3)
Ka dalbo Amazon
Dhamaan xubnaha ururka aasaasiga ah ee loo yaqaan 'Word Foundation', iyadoon loo eegayn heerka taageerada aad dooratay, waxay heli doonaan joornaaliheenna rubuclaha ah, Ereyga, iyo 40% dhimis buugaagta loogu talagalay. Hadaad jeceshahay inaad xubin ka noqotid oo aad sicir-dhimista ku qaadatid dalabkaaga, ama hadaad xubin xubin ka tahay oo aad rabto inaad dalbato sicir-dhimista, fadlan Nala soo xiriir in lagu dhigo dalabkaaga jeeg, taleefan ama fakis.
Ka qayb qaadashada xubinimada
Xubin sare ama xubin arday
In ka badan 70 sano, Word Foundation waxa ay ka go'an tahay in ay Harold W. Percival shaqadiisa ka dhigto mid ay heli karaan dhammaan kuwa raadsada Runta. Ku-deeqidda aadka loo mahadceliyey waxay gacan ka geysan doontaa ballaarinta gaaristayada waxayna sidoo kale taageertaa meelo badan oo muhiim ah oo shaqadeena ah, sida ku-haynta buugaagta daabacaadda, daabacaadda elektaroonigga ah, xayaysiinta, iyo bixinta buugaag bilaash ah maxaabiista xabsiga, maktabadaha, iyo shakhsiyaadka aan awoodin inay awoodaan.
Kaalmeyno Waddooyin Kale
Fadlan nala soo xiriir ku saabsan:
Sameynta hadiyad sanduuq sanadle ah
Sameynta hadiyad kaydka ama dammaanadaha
Diyaarinta soo celinta tabaruca billaha ah
Xusuusnow erayga aasaasiga ah ee dardaarankaaga